28 May 2020 Volume :8 Issue :17
UNks Fiona Khan, umfundi weMasitazi KwezeMfundo.Click here for English version
Umfundi wezeMasitazi KwezeMfundo nongumbhali ovuthiwe, uNks Fiona Khan, uqokwe phakathi kwababhali abangama-40 emhlabeni ukuyohlala phesheya njengombhali, phecelezi i-Writing Residency eGrondel’s House e-Iceland.
Bazohlala kusukela ngoMfumfu e-Reykjavík, engelinye lamadolobha e-UNESCO obuciko bezincwadi.
Ngokuhlanganyela ne-Reykjavík International Children’s Literature Festival Mýrin, lolu hambo lwangalonyaka luqondene nezincwadi zezingane. Le festiveli iyoba mhla wesi-8 kuya mhla we-11 ngoMfumfu kanti u-Khan ungomunye wababhali abayobe bekhona. Uzokwethulwa emikhakheni yezincwadi neyemitapo yolwazi kuleliya dolobha kanti uzohlangana nabafundi nabathandi bezincwadi kwi-Mýrin Festival. U-Khan ngalesi sikhathi uzogxila ekwenzeni incwadi yezingane yopopayi nge-Reykjavík, athole ithuba lokubona idolobha, i-Iceland nesiko lakhona nelezincwadi. I-Reykjavík UNESCO City of Literature for Marketing and Tourism izosebenzisa umsebenzi wakhe obhaliwe.
Lo mbhali uhlela ukuthi enye yezincwadi zakhe ihunyushelwe kwezinye zezilimi zase-Iceland ukugqugquzela izinjongo zokonga imvelo ze-UNESCO nezilimi zomdabu zamazwe ehlukene. Njengomsunguli we-Global Forum 4 Literacy, uhlose ukuphucula umbono nenjongo yomkhankaso wakhe i-#Learn2Read2Write ne-#ReadingRocks.
‘Ocwaningweni lwami nasezifundweni zami njengomuntu ofundisayo, ngithole ukuthi ukufundisa ngendlela ebonakalayo olimini nasekufundeni kusiza ngokuhlanganisa nokushintshela ezilimini zomdabu eziningi esizikhuluma eNingizimu Afrika nanoma kuphi emhlabeni,’ kusho u-Khan. ‘Amandla encwadi yopopayi adelelekile uma kukhulunywa ngokugqugquzela ukufunda nekhono lolimi. Ngikholelwa kakhulu ekutheni umlingiswa oqavile onomyalezo onohlonze angaba neqhaza elihle kwizinselelo zokufunda nezolimi ze-Creative Cities Network futhi ingahunyushelwa kunoma yiluphi ulimi lwanoma yiliphi izwe kulawo angabalingani.’
U-Khan uqale ngohlaka lombhalo, uzobe eseluthuthukisa lube ngenye yezinselelo i-Challenges of Climate Change. ‘Inselelo yethu enkulu eNingizimu Afrika wukufunda. Opopayi batholakala kalula, ababizi futhi basabalaliseka kalula eNingizimu Afrika, ikakhulu emakhaya nasemalokishini lapho ingekho khona imitapo yolwazi. Opopayi benza futhi sikwazi ukufunda siphumisele, ubuciko bokulingisa nemidwebo. Kukhulu okunye okungenzeka,’ kwengeza yena.
Ekhuluma ngezinto azilindele kulolu hambo, u-Khan uthe: ‘Ngikubheke ngamehlo abomvu ukwakha ubuhlobo nezwe engiya kulona nokubona isiko, umlando nemikhuba yakhona kuhlangene nezindlela ezintsha ezihambisana nobuchwepheshe bokwenza izinto ekubhaleni, ekufundeni nasekushicileleni. Angikaze ngithathe uhambo olunjena kanti ngilibheke ngamehlo abomvu njengethuba lokucija, ukuqeqesha nentuthuko eThekwini naseNingizimu Afrika.’